“Messi waa inuu horumariyaa awooda jirkiisa” – Ronald Koeman – Gool FM
“Messi waa inuu horumariyaa awooda jirkiisa” – Ronald Koeman
(Barcelona) 13 Sebt 2020. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa faallo ka bixiyay guushii 3-1 aheyd oo ay kooxdiisu xalay ka gaartay naadiga Gimnàstic de Tarragona kulankii saaxiibtinimo oo ay wada ciyaareen, taasoo qayb ka ah isu diyaarinta Barca ee xilli ciyaareedka cusub.
Goolasha Barcelona waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann iyo Philippe Coutinho, iyadoo laga war qabo in kulankan uu ka qeyb galay Lionel Messi qeybtii hore ee ciyaarta, halka Luis Suarez iyo Arturo Vidal ay ka maqnaayeen kulankan sababo la xiriira inay ku dhowyihiin inay ka tagaan Camp Nou.
Ronald Koeman oo kulankiisii ugu horeeyay maamulay kooxda Barcelona ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta, waxaana uu yiri, sida uu daabacay wargeyska “Marca”.
“Waxa ugu fiican ayaa ah in ciyaaryahan walba uu ciyaaray 45 daqiiqo, wali waxaa naga maqan taam ahaansho buuxda, waxaan ku arkay waxyaabo fiican goolashii koowaad iyo labaad, balse muhiimada ayaa ah in dhamaan ciyaartoyda ay soo baxeen iyaga oo aan dhaawac qabin”.
“Casharadii tababarka ilaa iyo hadda, waxaan inbadan ka shaqeynay dhanka jirka, wixii hada ka dambeeyana waa inaan qabanaa waxyaabo farsamo oo dheeri ah”.
“Waan ogahay in hadda uu isbedel ku yimid qorshaha taatikada marka loo eego sanadihii hore, laakiin waxaan u maleynayaa inay jiraan ciyaartoy khadka dhexe ka ciyaara oo sameyn kara taas. laxanka kubadda waa inuu sarreeyaa si loo abuuro masaafooyin u dhexeeya xariiqyo iyo goolal dhalis”.
Intaas kaddib Ronald Koeman ayaa ka hadlay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi wuxuuna yiri:
“Wuxuu muujiyey isla ruuxdii sida maalintii koowaad oo kale, si fiican ayuu tababarka u qaatay, isla sidaas ayuu sameeyay maalinta fasaxa, tayadiisa ayaa iska hadlaysa, laakiin wuxuu si buuxda u ogyahay inay tahay inuu horumar ku sameeyo awooda jirkiisa”.